AH: ဘာမြင်ရလဲ? - ၃
ဒီနေ့ မနက် အိပ်ယာထတော့ အုန်းကလွဲနေတယ်။ အုန်းလွဲနေတော့ ဇက်က ခိုင်နေသပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ဒီပိုစ့်လေး တင်ချင်တော့ ဒီဓာတ်ပုံတွေကို ထပ်ကြည့်မိတယ်။ အဲ့ဒီလို ကြည့်လိုက်တော့ လွဲနေတဲ့ ဇက်က ပိုပြီးတော့ နာသွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကောက်ချက်တစ်ခု သေသေချာချာ ချလိုက်မိတယ်.. အုန်းလွဲနေတဲ့လူတွေ ဒီဓာတ်ပုံတွေကို မကြည့်ပါနဲ့လို့ပေ့ါ။ အဲ့ နောက်တစ်ခုက မျက်မှန်သမားတွေလည်း မကြည့်ရင် ပိုကောင်းမယ်.. မဟုတ်ရင် ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်မှန် ကျွတ်ထွက်သွားနိုင်သေးတာကိုး.... ကဲ ပုံလေးတွေ ကြည့်ဖို့ အသင့်ဖြစ်ရင်တော့ စကြည့်နိုင်ပါပြီ။ ပုံတွေကို မြင်ရချင်ရင်တော့ ခေါင်းကို တွင် တွင် ခါမှ မြင်နိုင်မှာပါ။
ကဲ ခေါင်းခါလို့ အားရသွားပြီးတော့ နောက်ထပ် ပုံလေးများကြည့်ချင်သေးရင်
ဘာမြင်ရလဲ? - ၂ မှာလည်း သွားကြည့်နိုင်ကြပါကြောင်း
Posted by AH at 7/05/2012 07:07:00 PM
ညိမ်းနိုင် July 5, 2012 at 7:47 PM
Candy July 5, 2012 at 8:18 PM
မူးသွားတာပဲ.. တချို့ဟာတွေတော့ မြင်သလိုလိုပဲ..
စံပယ်ချို July 5, 2012 at 8:27 PM
Tun Tun Ko July 8, 2012 at 10:22 AM
u making me to die cos i trying this as soon as i woke up but interesting. i am afraid i will die.
တိမ်ပြာ(မနောမြေ) July 16, 2012 at 1:35 PM
ဟုတ်ကဲ့ တော်တော်ကို မူးသွားပါတယ်